Macalin Ole Gunnar Solskjær oo ugu baaqay da’ayarta Man United inay wax ka bartaan Odion Ighalo – Gool FM
(Manchester) 06 Mar 2020. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in weeraryahanka reer Nigeria ee Odion Ighalo uu soo bandhigi doono qaab ciyaareedka ay ka rajeeneysay kooxda marka ay shaqaaleysiineysay, isla markaana uu horumar la sameyn karo saaxiibadiis.
30 jirka ayaa dhaliyay labo gool, kulankii xalay ay 0-3 kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta ee Derby County.
Manchester United ayaa u gudubtay wareega siddeed dhamaadka tartanka FA Cup, kaddib markii ay Derby County kaga adkaatay 0-3 kulankii ka tirsanaa kulamada shanaad ee tartankan.
Haddaba macalin Ole Gunnar Solskjær ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kaddib ciyaarta wuxuu ku muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay wax qabadka Odion Ighalo ee kooxda wuxuuna yiri:
“Odion Ighalo wuxuu sameeyaa wixii aan ka dalbanay markii aan shaqaaleysiineynay, waxaana jira waxyaabo kale ee badan, Isbadel ayuu sameyn doonaa wuxuuna diirada saari doonaa dhanka hore ee goolka, wax shaki ah kama qabo”.
“Wuxuu leeyahay awood jireed, wuxuu leeyahay awood uu kubadda ku gudbin karo isla markaana uu ku heysan karo, way ku adag tahay daafac kasta inuu la macaamilo marka uu filanayo kubadda, isla markaana uu horey u dhaqaajinayo”.
Intaas kaddib macalin Ole Gunnar Solskjær ayaa tilmaamay in da’ayarta kooxda Manchester United ay ka baraan karaan Odion Ighalo sida loola dhaqmo daafacyada, kaasoo kooxda la sii joogi doona ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
Timo Werner oo shaaciyay go’aankiisa kaga aadan heshiiska uu ugu biirayo Liverpool